RFID အထည်အလိပ်ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, RFID Nonwoven ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကိုဆေးကြော, RFID Polyester Material Clothing Washed Tag
RFID အထည်အလိပ်ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, RFID Nonwoven ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကိုဆေးကြော
အဝတ်အစား Tag ကို RFID အထည်အလိပ်ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, RFID Nonwoven ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, RFID Polyester Material Clothing Washed Tag, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကိုဆေးကြော
အတိုင်းအတာ: 60x45mm, သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်
ပုံနှိပ်ခြင်း: Eco-friendly စီဘီနှင့်အတူ Flexographic ပုံနှိပ်ခြင်း, အရောင် Fast: 4~5ဒီဂရီ
personalization: ဘားကုဒ်, QR ကုဒ်ကို, အမှတ်စဉ်နံပါတ်
အဖုံး: 2000PC များ / သေတ္တာ, 50သေတ္တာ / စက္ဏူထူ. သို့မဟုတ် 2000pcs / လိပ်, 8000PC များ / စက္ဏူထူ
စံ: ISO18000-6C, EPCglobal ClassI Gen2
chip: NXP UCODE G2IM, ဂြိုလ်သား Higgs3, Impinj M4QT
အသုံးပြုသူမှတ်ဉာဏ်: 512 နည်းနည်း
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ:77dBi အင်တင်နာအောက်မှာမီတာ
data transfer နှုန်းက: 640ဋ-bits / s နဲ့
လုံခွုံရေး: TIME က, စကားဝှက်ကို, EAS (သာ G2IM chip ကို)
identification မှုနှုန်း: အထိ 1200 tags များ / စက္ကန့်
anti-တိုက်မှု: အကွိမျမြားစှာ tags များစစ်ဆင်ရေးထောက်ခံ, အထိ 1200 tags များ / စက္ကန့်
ပတ်ဝန်းကျင်ကြာချိန်: 2H ဘို့ရေကိုရေဆေး, +1002H များအတွက်℃ခြောက်သွေ့
operating: -25℃ ~ + 120 ℃, 5~ 95% RH အ, အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့
သိုလှောင်ခြင်း: -5℃ ~ + 45 ℃, 5~ 95% RH အ, အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ:2+ 25 ℃အောက်မှာတစ်နှစ်
The UHF Fabric Clothing Tag, nonwoven material, embedded NXP G2IM/Alien Higgs 3/Monza 4QT chip clear inlay, အထိ 512 user memory, 7m read range, sewing enabled, ISO18000-6C & EPC Gen2 protocol compliance, အထိ 1200 tags/second identify speed, sewable, washable, dryable.
Contactless interface with read distance up to5မီတာ
High performance NXP UCODE G2IM, ဂြိုလ်သား Higgs3or Impinj M4QT chip
အထိ 512 bits user memory for self-programming
High security features like TID, Password ကို, EAS
ထောက်ပံ့2hours of continuous water washing and2hours at 100 ℃ drying
I am interested in your product RFID Fabric Material Clothing Tag, RFID Nonwoven ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကိုဆေးကြော
prev: RFID အဝတ်အစား Tag ကို, RFID စင် Tag ကို, RFID ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ယက် Tag ကို, RFID အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်အထည်အလိပ် Tag ကို